Muriel Harris Abaalmarinta Adeegga Ugu Wanaagsan - Ururka Xarumaha Qoraalka Caalamiga ah
Waxaa loogu magacdaray qaataha kowaad oo laga bixiyo shir kasta oo kale ee Ururka Xarumada Qorista Caalamiga ah (IWCA), Abaalmarinta Adeegga Muriel Harris ee aadka u wanaagsan waxay aqoonsanaysaa adeeg heersare ah oo uga faa'iidaystay beesha xarunta qoraalka caalamiga ah siyaabo muhiim ah oo sal ballaadhan.
Magacaabista waa in loo soo diraa hal dukumeenti PDF ah oo bogag nambareysan yihiin, waana in ay ku jiraan agabyada soo socda:
Warqad magacaabid oo ay ku jiraan magaca iyo hay'adda qofka la magacaabayo, aqoontaada shakhsi ahaaneed ama waayo-aragnimadaada ku darsanaanta adeegga qofka la magacaabay ee beesha xarunta qoraalka, iyo magacaaga, xiriirka hay'ad iyo ciwaanka emailkaaga.
Dukumeenti taageero oo faahfaahsan (ugu badnaan 5 bog). Kuwaas waxaa ku jiri kara qaybo laga soo qaatay taariikh nololeedka manhajka, aqoon-is-weydaarsi ama agab la daabacay, sheekooyin ama qiso, ama shaqada asalka ah ee qofka la magacaabay.
Warqadaha kale ee taageerada (ikhtiyaar laakiin ku xaddidan 2)
Habka Magacaabista 2020: Magacaabista waxaa la aqbali doonaa illaa Juun 30, 2020. U dir magacaabista Guddoomiyaha MHOSA, Michele Eodice (meodice@ou.edu).
Wax ku saabsan taariikhda MHOSA ka akhri Qorista Warsidaha Shaybaadhka 34.7, bogga 6-7 .
2016: Paula Gillespie iyo Brad Hughes
1997: Byron joog